Gbasara Anyị | Ọkọwa Okwu Ahụike
2 Ọkọwa Okwu Ahụike
3 Site na iji Protocol Health - Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na Nsogbu kachasị njọ nwere ike ịme Ọ nweghị ihe?
"Ọkọwa Okwu Ahụike bụ ndepụta na-arịwanye elu nke ọgwụgwọ na ọgwụgwọ anụ ahụ sitere n'okike. Anyị na-ewepụta A iji Z nke ọgwụgwọ ahụike, ọgwụgwọ na ọgwụgwọ.
Any i nwere olile anya na inwere ihe ichoro.
Daalụ ma nwee ọ enjoyụ n'oge gị na webụsaịtị anyị. ”
Ndị otu ahụ @ Ezigbo Ahụike Dọkịta
Okwu Mmalite site Dr. Ariston P. Awitan MD
"Anyị bi ugbu a na mba ebe ndị dọkịta na-emebi ahụike, ndị ọka iwu na ndị ikpe na-emebi ikpe ziri ezi, mahadum na-emebi ihe ọmụma, gọọmentị na-emebi nnwere onwe, ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-emebi ozi, okpukpe na-emebi omume ọma, na akụ na-emebi akụ na ụba." Chris Hedges
Ihe mbu ị ghaghi ighota bu na ndi dibia bekee amamaghi otu esi egbochi ma obu dozie oria, tumadi n’ihi na ulo oru ogwu nwere ulo akwukwo ogwu ma ya bu kpebie ihe edere n’akwukwo a na ihe akuzi n’ime ulo akwukwo ha.
A bụ m onye dọkịta nọ ezumike nka Orthopedic lara ezumike nka. Anọwo m na 50 afọ n'ọrụ ahụike yana ọbụlagodi ọzụzụ m niile, Aghọtaghị m "ihe kpatara" ọrịa. Ọ bụ nanị ruo mgbe nwunye m nwụrụ site na ọrịa cancer nke 4th ka m malitere ime nyocha nke m. N'ime ime nke a, achọtara m nnukwu onye Nobel Laureate, Linus Pauling kwuru, sị, “Ọrịa niile na ọrịa ọ bụla nwere ike ịdaba na ụkọ ịnweta.”
Nke ahụ gbanwere ndụ m wee bụrụ onye na-azụ ahịa maka ihe niile m nwere ike ịmụta banyere mineral na ọrụ ha na-arụ na ahụike na nri mmadụ. Usoro ihe omume dugara gị, onye na-agụ akwụkwọ, na-agụ ozi a ma mụta otu ị ga-esi na-ejikwa ọtụtụ ahụike gị.
Enweghị m ego iji mee ka ozi a dị. Ọ bụ nchịkọta nke nyocha m, nke nwere olile anya ga - enyere ndị ọzọ aka izere nhụjuanya nwunye mm hụrụ n'anya diri.
Disclaimer: Ngwaahịa ọ bụla m tụrụ aro ya bụ ngwaahịa nke m nyochara n'onwe m iji jide n'aka na ihe m na-eji ma na-eme ka ndị ọzọ mara dị mma, dị ọcha ma nwekwaa ọfụma. Agaghị m ekwu maka mgbochi ma ọ bụ ọgwụgwọ. Ana m akọ akụkọ naanị ihe m mụtara n’aka ndị dọkịta ndị ọzọ, ndị ọrụ nyocha, ndị sayensị, ndị na-ahụ maka nri na-edozi ahụ na ndị ụlọ ọgwụ.
ANY WE N'BSLỌ AKWTAKWỌ AKWTAKWỌ AKW MKWỌ AKW MKWỌ AKW MKWỌ AKW MKWỌ AKW MKWỌ AKW MKWỌ AKW MKWỌ AKW MKWỌ N'ANYA
NA-AK PRODUZIRI NA NIILE DR. ARISTON P. AWITAN MD O N’EGO ANY REC NA-AH TO AREBỌCH ARE AH ARE BALR. NSO SHOPFREEMART. **
Enwere echiche ndị megidere ma eleghị anya isiokwu niile na ndụmọdụ m nyere onye na-agụ ya bụ iji karịa otu isi mgbe ị na-eme nyocha ihe ọ bụla.
Eziokwu ụfọdụ enweghị ike ịgbagha. Iji maa atụ, mineral bụ electrolytes na-ejigide ọrụ ọ bụla nke mmadụ. N'okwu okwuman, anyị nwere ike iji ha tụnyere ọkụ ngbanwe. Ntinye ọ bụla n’ụlọ gị na-enye otu ọkụ. Ọkụ a na-agbanye n’ime ụlọ ịsa ahụ gị anaghị agbanwu ọkụ n’ọkụ gị. Onye ọ bụla na-agbanwe nwere ọrụ nke ya.
Ahụ mmadụ na-arụ ọrụ eletrik n’otu ụzọ ahụ ụgbọala gị na-arụ. Gbọ ala chọrọ ọkụ eletrik na-amụnye mmanụ ọkụ, na-agba kọmputa nke ụgbọ ala ma gbanye ọkụ, onyunyo, mpi, wdg Mmebi dị mfe nke obere fuse ma ọ bụ ihe eletriki ndị ọzọ nwere ike igbochi ụgbọ ala gị ịgba ọsọ. Iweghachi ụgbọ ala gị ịrụ ọrụ zuru ezu nwere ike ịdị mfe dịka iji dochie fuuz na-adịghị ọnụ ma ọ nwere ike ịdị mgbagwoju anya dịka iji dochie bọọdụ kọmputa na kọmputa gị.
Mgbe etinye ego, enwere ike ịnwe ọnwụnwa ịgha ụgha n'akụkụ dọkịta, onye ọka iwu, onye ọrụ ụgbọ ala, ma ọ bụ ọkachamara ọrụ ọ bụla mgbe achọrọ enyemaka na nsogbu ị nweghị ike idozi. A na-atụ aro maka echiche nke abụọ, ọ gwụla ma onye ọrụaka ma ọ bụ dọkịta gị agwa gị na ha nwere ike idozi nsogbu gị ngwa ngwa na enweghị ọnụ na enweghị mmetụta ọ bụla.
Ekwekwala na-edozi akwụkwọ gị. Ọnụ ọgụgụ mmadụ ata ahụhụ mgbu na mmefu nke kemoterapi, ọbụlagodi mgbe dọkịta ha maara na onye ahụ enweghị ọrịa kansa. Ndị ọrịa nwụrụ site n'aka ndị dọkịta na-awa ahụ obi adịghị mma mgbe onye ọrịa ahụ O doro anya na ọ chọghị ịwa ahụ obi.
Enwere otutu ihe ị nwere ike imere onwe gị tupu ịchọ dọkịta, ọ nwere ike iju gị anya na ole ị na-achịkwa ahụike gị.
Ọrịa ọ bụla na ọrịa ọ bụla na - akpata otu akụkụ ma ọ bụ karịa na ahụ. Ikekwe ị nwere ike ịchọpụta mineral ndị ị na-enweghị, o yikarịrị ka ị gụọ akwụkwọ a ma ọ bụ site n'ịchọgharị n'ịntanetị na ịjụ ajụjụ dabara adaba.
Mgbe m na-aga ụlọ akwụkwọ ọgwụ, o nweghị ihe omuma banyere ọgwụgwọ ndị sitere n'okike adịghị adị. Soro uzo ego na ighota ihe kpatara ya. Ọgwụ bụ nnukwu azụmahịa ma n'ọtụtụ akụkụ na-akwalite anyaukwu na emeghị ihe n'eziokwu, yabụ ndị ọrịa na-akpachara anya.
Ejiri m 50 afọ nke ndụ m na ọrụ ahụike; Ọmụmụ 8-afọ ka ọ bụrụ dọkịta, 9-afọ iji bụrụ ọkachamara agbaziri agbaziri bọọlụ, gbakwunye 33 afọ nke ọrụ ọkachamara dị ka dibia Ochie.
N'agbanyeghị ọzụzụ a niile, ahụmịhe na ohere ọ bụla maka nlekọta ahụike ọ bụla, M na - enweghị ike ịchebe ndụ nwunye nke m, onye nwụrụ na Stage 4 Cancer.
N'inye ọdachi ahụ, amalitere m ịmụ ihe oriri na-edozi ahụ ma dabere na nyocha nke m na nyocha nke m na mineral ma na-achọpụta mmetụta ha n'ahụ mụ na ọtụtụ ndị ọzọ, ekwenyesiri m ike karịa mgbe ọ bụla na ọ nweghị ọrụ dị n'ime ahụ mmadụ na-enweghị mineral ịrụ ọrụ. ọrụ ndị ahụ.
Enweghị mineral na-ebute ọrịa na ihe ndị ọzọ m ga-akọwapụta na usoro a, ya bụ akpịrị ịkpọ nkụ, enweghị oxygen, oke iron, fluoride, chlorine, ọla ndị dị arọ na kemịkal niile na-egbu egbu.
Ọnọdụ ndị a niile nwere ike belata oke, nke nwere ike ibinye ahụike dị egwu ma nwekwuo ume maka onye ọ bụla na-agbaso usoro ọgwụgwọ ndị akọwapụtara dị n'akwụkwọ a.
Edere na ibe ndị a bụ ụfọdụ ngwaahịa, ụfọdụ n'ime ha nwere ike ịnweta ngwa ahịa ụlọ nri ma ọ bụ ụlọ ahịa nri gị na ụfọdụ n'ime ha bụ ngwaahịa ọpụrụiche ma ọ bụ aha njirimara.
A bịa n’ihe banyere iri nri, ị gaghị achọ ịbụ Rocket Scientist ịghọta na mgbe ụgbọ ala gị gwụsịrị na mmanụ dị gị mkpa iji gbanye mmanụ na mgbe ahụ mmadụ na-agbachasị mmiri dị ọcha na mineral, mkpụrụ ndụ gị na-akpọnwụ akpọnwụ. , na - eme ka ọ dị mfe maka nje virus na ọrịa ịwakpo, bụ nke na - ebute ọrịa na ọnwụ ọnwụ.
Nsi na-ebute ọrịa ma anyị bi n'ime ụwa nke na-egbu egbu ma e jiri ya tụnyere ọgbọ ole na ole gara aga. A na-achọpụta ọtụtụ puku kemịkal ọhụụ kwa afọ yana ọtụtụ n'ime ha na - emesịa ikuku anyị na - ekuru, mmiri anyị na - a drinkụ na nri anyị na - eri.
Kaadị, akụrụngwa, mgbidi e sere ese na ọtụtụ ihe ndị ọzọ n'ụlọ anyị na ọfịs anyị ugbu a na-emebi oke anwụrụ ọkụ. A na-eji ncha nke ahịhịa, ihe nhicha, ihe ncha ntutu, ihe nhicha, wdg na-aga n'ihu, ihe ndị a niile na-akpata ọrịa kansa, ọrịa shuga na ọtụtụ ọrịa ndị ọzọ.
Anyị ghọtara mmetụta nke inweta unyi n'ime mbepụ ma ọ bụ ọnya. Ọnya ahụ ga-aka mma karịa ọgwụgwọ. Ọ bụrụ na agwọghị ya, nsogbu ndị ọzọ nwere ike ịdapụta nke ga - emesịa nwee ike ịwa ahụ ma ọ bụ mbepụ. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ekpocha ya kpamkpam, ọ ga-agwọkarị ma ọ bụ gwọọ onwe ya. Ihe niile dị n’arụ ahụ na akụkụ ahụ ha na-aza otu aka ahụ mgbe ha butere nsí ụdị ụdị ọ bụla.
Ihe obula bu oria oria bu oria n ’udiri oria (udidi-2). Ọ bụrụ na nsí jupụtara na ya, ọ ga-enye ike ya niile iji kpochapụ nsị, nke na-egbochi ike imepụta insulin. N'ọnọdụ ụfọdụ, mgbe ewepụrụ nsị ahụ, pancreas ga-amalite imepụta insulin ọzọ, ọrịa mamịrị nke shuga na-apụkwa n'anya.
Ahụike bụ ihe naanị ahụ nwere ike ịme, mana anyị ga-eme nke anyị ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ka ahụ ahụ gwọọ onwe ya. Chineke kere ahụ mmadụ n'ụdị ahụ nke na mgbe anyị siri na ahụ pụta ma nweta mineral ndị kwesịrị ekwesị dị n'ime ahụ, ahụ ga-agwọ ma ọ bụ gwọọ onwe ya.
Tupu enwere ike idozi nsogbu ma ọ bụ ọrịa, anyị ga-ebu ụzọ ghọta nsogbu ahụ. Nsogbu a n'ọtụtụ ọnọdụ nke ọrịa shuga bụ oke ibu nke nsị na pancreas; ọ bụ ihe ahụ dị mfe!
Ọrịa niile nwere ọnọdụ mmachi. Anyị na-enye mgbaàmà ndị ahụ aha dị iche iche dabere na ebe a na-edebe nsị. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na etinye nsị na mmiri na - agbatị na gburugburu nkwonkwo, anyị na-akpọ ya Ọrịa ogbu na nkwonkwo. Nri a na-etinye n’arụ ahụ dịịrị mmadụ na-ebute Fibromyalgia. Ọkpụkpụ toxins na ụbụrụ na-enweta ọtụtụ aha dị iche iche site na Migraines ruo ADHD ruo Dementia, nkụda mmụọ, nchekasị, wdg.
Xụ nsị na akwara nwere ike ibute ọtụtụ Sclerosis n'ihi na toxins niile na-egbu acid, na nke a acid a na-eri oke myelin n'akụkụ akwara, nke abụghị naanị ihe na-egbu mgbu, mana emesịa na-emetụta arụmọrụ nke anụ ahụ.
Xxụ nsị na-apụta site na anụ ahụ nwere ike ibute ọrịa kansa ụjọ Psoriasis, ecc, wdg. Ndị a bụkwa acidic ma na - akpata ọkụ na itching. Wepụ nsí na mgbaàmà na-apụkarị.
Mgbe ụfọdụ otu akụkụ ma ọ bụ karịa adịghị ike karịa anụ ahụ na toxins gbara n'ime anụ ahụ mebiri emebi n'ihi enweghị ike ịlụ ọgụ nsị dịka ngwa ngwa dịka anụ ahụ gbara gburugburu. Nke a bụ nnukwu ihe iyi egwu nye anụ ahụ na anụ ahụ meghachi omume site na ịkpụ protein ma ọ bụ akwa fibrin n'akụkụ toxins, nke anyị na-akpọ tumo.
Mkpụrụ ndụ dị n’ime akpụ ahụ na-agbanwekarị iji na-adị ndụ, bụ́ nke anyị na-akpọ mkpụrụ ndụ cancer dị njọ. Mkpụrụ ndụ mechiri emechi na-enwe ihe na-egbu egbu n'ihi na enwere nnukwu nsí n'ime akpụ ahụ ha na-eto ngwa ngwa.
Tumo ahu na ewukari sisitemu nke ya, sel cancer na - ewete toxins site na ọbara ruru unyi nke na - abanye n’agba. N'ụzọ dị otu a, a na-asacha ọbara gị n'otu ụzọ ahụ mmanụ si enweta n'ọkụ ụgbọ ala gị wee sachaa mmanụ ahụ.
Ogwu bu enyi gi. E kere ya iji mee ka ndu gị dị ogologo, yabụ kedu ihe ọtụtụ mmadụ na-eme enyi ha? Ha na-agakwuru dọkịta ha nke na-achọ igbu Chemo, Radiation ma ọ bụ Surwa Ahụ.
Ngosiputa gosiputara na ndi n’adighi enweta ogwu ọgwụgwọ ọdịnala di ndu kariri ndi na anaghi enweta ya. Gịnịzi mere ọtụtụ mmadụ ga-eji họrọ ụdị ọgwụgwọ a siri ike?
Ọbụna ịnweta ọgwụ biops dị ize ndụ. Onye isi ụlọ ọgwụ na Hippocrates Cancer Clinic kwuru na ịnweta ọgwụ biopsy dịka ịkụchi oghere n'ime akpa osikapa. Ọkpụkpụ ahụ na - eme ka mkpụrụ ndụ kansa nwee ike, mana ozugbo emere ihe biopsy, mkpụrụ ndụ kansa nwere ohere ịbanye n'ọbara ọbara ma gaa njem n'ahụ mmadụ niile, ọ bụkwa ya kpatara ọrịa metastasis.
Nsogbu ozo nke ime nchọpụta bu eziokwu bu na o na-atu egwu ndi mmadu ikwenye na ha ga-anwu ma ha nwuo. Onweela ọtụtụ ikpe ebe ndị mmadụ na-ezighi ezi nyocha; ha enweghi oria n’ezie, ma mgbe dọkịta gwara ha na ha mere, usoro nkwenye ha mere ka ha bute ya.
Usoro iwu azụmaahịa mbụ ma ọ bụrụ n ’ọnya na-arịa ma ọ bụ ọrịa ọ bụla bụ ịgbanye ike anụ ahụ iji wepụ onwe ya. Enwere ọtụtụ mmemme detox siri ike, mana masịrị m ịrụ ọrụ na okike ma nye anụ ahụ ihe ọchọrọ iji gbanye ikike nke Chineke nyere iji wepụ onwe ya. Ọ bụghị naanị nke a na - arụpụta detox ka mma ma zuo ezu, mana ọ bụghị ihe na - abaghị uru dịka ọtụtụ ngwaahịa emebere maka detoxifying.
Agaghi eme ka aru ghara ime onodu akpukpo aru ma enwere m ike ikwe nkwa ma oburu n’a dighi a Shopu mmiriFatFreeMart Hydration Water na akpachapuru gi aru. Lee FreeMart Hydration mmiri
Ọrịa cancer bụ ihe m chere kemgbe kemgbe ịkwụsị ịtụ egwu ma ọ bụrụ na ị na-eche na ị nwere ọrịa kansa, m na-atụ aro ka iku ume miri emi iji kpochapụ isi gị wee bido gụwa akwụkwọ n’ihe kpatara ọrịa kansa gị, n’ihi na nke ahụ ga-aza azịza ọgwụgwọ gị . Enwere ọtụtụ ụzọ iji kpochapụ ọrịa kansa yana kwa ndị ọrụ ahụike achọpụtala ọtụtụ ọgwụgwọ, mana oge ọ bụla ha mere, ha na-ezo ya ngwa ngwa ka ndị ọha ghara ịchọpụta.
Na 1931, Dọkịta Otto Warburg natara onyinye Nobel maka ọmụmụ ya na mkpụrụ ndụ kansa. Ndi American Medical Association kpagburu Dọkịta Warburg ma gwa ya ka ọ bata na United States, ka ọ ghara ikpughe ọgwụgwọ ya na-adịghị ọnụ ma dị mfe maka ọrịa kansa. O kwuru na kansa enweghị ike ịwa ahụ na pH nke 7.0 ma ọ bụ karịa.
Otu ụzọ dị mfe isi nọgide na-enwe phykal dị pịlị bụ ka ime ka mkpụrụ ndụ gị dị mmiri mmiri. Mkpụrụ ndụ juputara kpamkpam na-enwe pH nke 7.2 - 7.4. Easiestzọ kachasị mfe iji mee ka ahụ gị dị mmiri ọ isụ isụ bụ site n ’Shopụọ mmiri ShopFreeMart Hydration Water.
Otu onye choputara oria cancer m kwuru na oria cancer ka arua ya n’ahu n’ime aru ya nile ewezuga obi ya, tinyere oria kansa na oria. O kwuru na ọ malitere ị galụ mmiri 2 mmiri kwa ụbọchị na naanị n'ime izu ole na ole ka dọkịta ya na-ekwupụta na ọ nweghị ọrịa kansa.
Enweghị m ike ịchọpụta ihe omuma a ebe ọ bụ na ahụtụghị m ya na ihu na ahụtụbeghị akụkọ dọkịta ya, mana ọ dị m ka ọ bụ onye kwenyere n'ihe ọ na-ekwu ma ọ nweghị uru ọ ga-erite site n'ịgha ụgha.
Anaghị m ekwu na onye ọ bụla kwesịrị ị drinkụ galọn mmiri 2 kwa ụbọchị. Ihe m na-atụ aro bụ na hydration bụ akụkụ dị mkpa nke usoro ahụike ọ bụla dị ka akpịrị ịkpọ nkụ bụ nnukwu ihe kpatara ọrịa niile. Enwere m ike ịgbakwunye na WaterFreeMart Hydration Water bụ mmiri kacha enye m mmiri achọpụtara m.
Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya na ị ga - eme ka ahụ gị dị mmiri mmiri, n'agbanyeghị ọnọdụ ahụike gị nwere ike, ị ga - enwe ike ịbanye na ya ngwa ngwa.
Turntụgharị n'okike maka azịza anyị nwere ezi uche, mana mgbe m bụ dibịa bekee, amachibidoro m ide ihe ọ bụla FDA akwadoghị. Ndị dibịa bekee mere nke a enwekwaghị ikikere. Ọtụtụ ezigbo ndị dọkịta ahapụla US wee gaa mba ndị ọzọ iji gaa n'ihu na-agwọ ndị ọrịa kansa ọgwụ.
Ikekwe ị nụla akụkọ banyere onye ọkwọ ụgbọ mmiri nke tụpụrụ mkpo jupụtara n'ime ụgbọ ya mgbe ha batachara n'ikpere mmiri nke ebe okpomọkụ. Na njem ịlaghachi, ọ bụ naanị ya bụ onye nọ n'ụgbọ ahụ nke enweghị ọrịa a na-atụ ụjọ nke a na-akpọ skurvy. N'ịchọpụta nchọpụta a dị mkpa, ndị ọkwọ ụgbọ mmiri pụtara na ebido eburu ibu n'ụgbọ ha, otu a ka esi nye ndị ọkwọ ụgbọ mmiri Bekee aha limeys.
Taa ọ bụ ihe ọmụma ebe niile na ụkọ vitamin C bụ ihe na-akpata ọrịa, ma tupu nke a amata, scurvy bụ otu n'ime ihe na-egbochi njem ụgbọ mmiri, na-egbu ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị njem na ndị njem na njem dị anya. N’ezie, n’ụbọchị ndị ahụ, ọrịa ọnwụ gburu karịa ọrịa kansa taa.
Ọ ga - ekwe omume na ọrịa kansa nwere ọrịa metụtara ọrịa scurvy? Anụbeghị m onye ọ bụla gosipụtara echiche a n'akụkụ myslef, mana m kwenyere n'onwe m na ha bụ ọrịa ejima nwanne. Tụnyere foto nke ndị nwere ọrịa abụọ, ha yiri ibe ha n'ọtụtụ ụzọ. Anyị ga-ewere ya na ọ bụrụ na ha metụtara na ikekwe lemons ma ọ bụ limes ga-egbochi ma gbuo kansa, otu ọ si kwa scurvy.
Eziokwu bụ, ọ bụrụ na i mee nchọpụta Internetntanetị na okwu a, obi abụọ adịghị ya na ị ga-enweta akụkọ na-ekwu na ihe ọ organicụ organicụ mkpụrụ osisi dị ọhụrụ site na lemons ma ọ bụ limes na-egbu kansa ngwa ngwa karịa kemoterapy ma ọ bụ na-agaghị egbu mkpụrụ ndụ na-abụghị ọrịa kansa dị ka kemoterapi na-eme, na-eme Ọ bụ ihe ọzọ dị mma maka ndị na-achọghị ịgwọ ọgwụgwọ na-egbu mgbu nke a maara na-akpata ọrịa kansa na anụmanụ yana obi abụọ adịghịkwa ya.
Kedu ihe kpatara na ndị dọkịta enyeghị gị mmiri ọgwụ lemon mgbe a chọpụtara na o nwere ọrịa kansa. Would gaghịzi achọ dọkịta?
Ọrịa cancer bụ otu n’ime ọrịa ndị kachasị mfe iti mgbe ị ghọtara ihe kpatara ya. Ana m akwado ka ị gụọ akụkụ mbụ nke akwụkwọ a gụnyere Protocol Health m ma gụchaa isiakwụkwọ na Candida. Isiakwụkwọ atọ ndị ọzọ ga-aba uru ozugbo ma ọ bụrụ na ịlụ ọgụ maka nsogbu ahụike bụ Mmega Ahụ Na-eku Egwu, Nkụ Mmanụ na Nnu.
Leekwa Isi nke Ọrịa kansa.
Ọ dịwo anya a matara na ihe oriri na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na vibration sel, mmepụta ume na ahụike n'ozuzu. E nwekwara ihe akaebe a na-apụghị ịkọwa akọwa na nsị dị n'ahụ na enweghị mineral na-egosipụta n'ezie dịka ọrịa (enweghị ahụ iru ala) n'ụwa osisi, anụmanụ na mmadụ.
Tinyere ọtụtụ usoro iwu dị mfe ma dị ọnụ ala, edekwarala m ngwaahịa ole na ole ga-enyere anụ ahụ aka ịmalite ngwa ngwa ma nwekwaa ngwa ngwa karịa ngwaahịa ahụ ike “ahụkarị”.
A na-enweta ozi a site na akụkọ ihe mere eme nke ọtụtụ puku afọ nke iji na ikiri ihe na-ahụ anya, yana site na ugwu nke nyocha ọgwụ na ọmụmụ sayensị.
Nke a nwere ike ịbụ ezigbo ndu kachasi mkpa iji nyere gị aka ịghọta ihe ndị kpatara ọrịa na ịka nká, yana otu ị ga-esi nye gburugburu gị, gburugburu ebe obibi gị na nri gị, nke nwere ike ime ka ahụike gị kawanye ogologo.
Ọtụtụ puku awa abanyela n'ime nyocha, na-ede ma dekọta ozi ndị a. Ana m agbakwunyekwu oge ka oge na-enye ohere, yabụ lelee oge ụfọdụ maka mmelite.
Ọtụtụ ndị ejirila ozi a nwere onwe ha pụọ ​​n'ọrịa. Ọ dabara nke ọma, abụ m otu n'ime ndị ahụ.
Emeghị ozi a iji chọpụta ma ọ bụ gwọọ ọrịa ọ bụla. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị họrọ iji ngwaahịa ndị m tụrụ aro ma ọ bụ ọgwụgwọ ọ bụla nke achọtara na ibe ndị a, ana m agba gị ume ka ị depụta ndepụta nke ọrịa ọ bụla ị nwere (gụnyere mgbu na mgbu ndị ị na-eleghara anya ugbu a n'ihi na ị na-eche na ha agaghị apụ ma ọlị) nke mere na otu ụbọchị ị ga - eso ndị ọzọ kerịta ihe ịga nke ọma gị ma nye ha olileanya ịnwale ihe ndị a n'onwe ha.
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na FDA enyochala akwụkwọ a, ha agwaghị m ya. Eji m n’aka na enwere ọtụtụ n’ime nzukọ a nke nwere ike ịmụ otu ihe ma ọ bụ abụọ site na ịgụ ya.
Ọzọkwa, ngwaahịa ndị ahụ edepụtara abụghị maka ịchọpụta, ọgwụgwọ, ọgwụgwọ ma ọ bụ gbochie ọrịa ọ bụla. Ha bụ naanị nri sitere n'okike nke ị na-agaghị enwe ike inweta site na nri ị na-eri.
Mara: Ọtụtụ n’ime ndị mmadụ mgbe ị na-eme ihe Protocol Health m n’okpuru ala na-ewepụ ọrịa ndị dị adị chọrọ ọgwụ. Enwere ọgwụ ụfọdụ, agị chọọ ka dọkịta lelee ya ma ọ ga - eji nwayọ belata ya na ndụmọdụ ya ka ọnọdụ gị mma.
Enweghị m nkwa ọ bụla ma ọ bụ kwe m nkwa na onye ọ bụla ga - enyere aka na usoro a karịa na - ekwu, mkpụrụ ndụ na akwara mmadụ bụ ndị ọrụ ebube mgbe ewepụrụ nsị na mmanụ dị mma.
Kedu ihe kacha njọ nke nwere ike ime ma ọ bụrụ na ị kwụsị itinye nsí n'ahụ gị wee malite ime ka nri ị na-eri kawanye mma.
E wepụrụ foto nwa okorobịa a si India izu 8 izu. N'oge onyonyo nke mbụ, o nwere kansa cancer ma bụrụkwa onye ọrịa na-ewere ọgwụgwọ-ọgwụ.
Udo Delangelo si Australia, mere ka a mara n’ozi ahụike. O bi na India, o nweghi uzo n’ime ahia a m si akwado.
Na ndụmọdụ Maazị Delangelo, ọ kwụsịrị ị cheụ ọgwụ were wee rie nri nke mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri. Ọ malitekwara were tsp. nke ị sodaụ mmiri soda n'ime otu iko mmiri ugboro abụọ kwa ụbọchị na ị drinkingụ ihe ọ ofụ ofụ nke lemon azọrọ ọhụrụ n'ime otu iko mmiri 4 ugboro n'ụbọchị.
Ka ihe dị ka ụbọchị iri gachara, ọ gbara okpukpu abụọ nke lemon site na ịpịpụta 2 ọhụrụ lemons n'ime iko mmiri 4 ugboro n'ụbọchị. N'ime izu ole na ole 8 ọ bụ foto nke ezigbo ahụike.
Rịba ama: E mechara tinye Protocol Health dị ka mgbakwunye nke akwụkwọ a iji nyere ndị mmadụ aka na nsogbu ọ bụla siri ike ga-agbake na ngwa ngwa.
“Usoro dị mma m na-akwado ya gụnyere ịbelata mmadụ, ịgbanwe nri gị na otú o si ebi ndụ, na idozi erighị ihe ndị na-edozi ahụ. Site na nke a, ka m kwuo na ShopFreeMart Ngwaahịa anaghị agwọ ma ọ bụ gwọọ ọrịa ọ bụla. Ha bụ naanị ngwaahịa kachasị mma achọpụtara m nke na-enye nri ndị mmadụ na-arịa ọrịa na-enweghị nri. Ihe mbu m choro n’ọtụtụ ọnọdụ bụ Siaga. Ana m akwado ịmara na ịnwale ihe niile dị na ShopFreeMart dị ka nke ọ bụla nwere akụrụngwa pụrụ iche nke nwere uru pụrụ iche.
EZIN FLỌ: Ngwaahịa ndị m ga-ekwu maka ya, na ozi ndị a ebughị ebumnuche nyocha, ọgwụgwọ, ọgwụgwọ ma ọ bụ gbochie ọrịa ọ bụla, ọ bụghịkwa n'ụzọ a ga-eji dochie anya ndụmọdụ ọkachamara.
Tupu itinye ozi nke ọ bụla, onye ọ bụla nwere ọrụ ịtụle ihe ọghọm na uru nke usoro a. O nwere ike ịchọ ọgwụ tupu a gwọọ ya ma dọkịta ga-elele ya oge niile.
Ozi a bụ maka ebumnuche mmụta naanị na anaghị ebunye ma ọ bụ akwụkwọ ikike, ma ọ bụ na-egosipụta ma ọ bụ na-egosi, nsonaazụ ọ bụla, nkwa ma ọ bụ uru ọ bụla site na iji ozi a.
Okwu FDA adịghị atụle nkwupụta ndị a.
NJOKU AH HEH HER HE AHAĹR CR MARA IWU:
6) NKWUKWU OKWU
7) MAGNESIUM (mmiri)
11) ANGW THE AH THE
1. SALT - Nnu nnu
A na-agbanye nnu nnu na tebụl ka ọ dị elu maka ọnọdụ dị elu na nhazi, a na-ewepụ mineral ndị ahụ ma tinye Aluminom iji mee ka ọ ghara ịchacha, ihe ndị a niile na -eme ka ihe a ghara ịba uru ghara ịdị mma maka mmadụ. A ga-egbochi iri nri emebere nwere ụdị nnu a ma dochie nnu nnu n'ọnọdụ ya.
Enwere nnu nnu atọ m na-akwado: nnu nnu mmiri Celtic, nnu Himalayan na ezigbo nnu nke sitere na Redmond Utah. A na-enweta nnu ndị a ngwa ngwa n'ọtụtụ ụlọ nri nri ahụike.
E nwere ọdịnala na-a Xụ ihe ọNUMụ Xụ 1-2 tsp. nke nnu n’ime otu iko mmiri dị n’ụtụtụ kwa ụtụtụ. Ha nwere ahụ ike karịa ndị na-enweghị. Nnu bụ Sodium Chloride ma Sodium bụ mmiri nke na-edozi ahụ. Onye ọ bụla nwere nnukwu mmiri ma ọ bụ ntakịrị ihe na ahụ nwere ike oke nnu.
N'ezie mgbe ndị mmadụ gara n'ụlọ ọnọdụ ihe mberede, a na-enyekarị ha IV, nke na-abụghị ihe ọ bụla karịa mmiri na nnu dị ọcha. Ọtụtụ mgbe, ndị mmadụ na-agbake ngwa ngwa mgbe ha fụsịrị mmiri n'ụzọ dị a.
Agụrụ m akụkọ banyere otu nwoke mgbe ọ nwetasịrị ọtụtụ nsogbu ahụike yana ọtụtụ ọrụ ọfụma, nyochara onwe ya n'ụlọ ọgwụ wee kwụọ ụgwọ itinye ya na IV ruo mgbe ọ nwụrụ. Mgbe ọ nwụsịrị, ha mere nyocha ahụ wee hụ na akụkụ ahụ ya nile agbakeela kpamkpam. Ihe gosiri na o nwere ike ịbụ na ọ na-ebi ezigbo ndụ ma ọ bụrụ na o rie nri.
Ihe m chọpụtara bụ na IV bụ naanị ọgwụgwọ ndị dọkịta ọgbara ọhụrụ nwere na akpa ha na ọ bụrụ n’ịria ọrịa, o yikarịrị ka ọ ga - akara gị mma ịnweta IV karịa ị drugsụ ọgwụ, radieshon, chemotherapy, wdg.
Ihe bụ nsogbu bụ na mgbe inyechara gị ọtụtụ ọgwụ IV na-eziga gị n'ụlọ ka ị gwa gị enweghị nnu ma ọ bụ obere nnu, ka ị wee kwụsị inwe mmiri ọzọ ịchọrọ ịbanye maka idozi mmiri nnu.
Nkpachi afọ bụ n'ihi mmiri afọ. Mgbe ị na-a Xụ 1-2 tsp. Nnu nke nnu n'ime mmiri ma ọ bụ ebe a na-ekpo mmiri, ọ nwere ike iche ya na ọbara ya mere ọ na-ejikọ ya aka mgbaze kama akụrụ. Nke a na-asachapụ mmiri ma na-egbu mmiri ma bụrụkwa ihe ịtụnanya dị mma na ezigbo usoro ahụike. Onye ọ bụla na-enwe ihe ndina ma ọ bụ ụdị mbufụt ọ bụla nwere ike irite uru site na ị drinkingụ mmiri nnu n'ụzọ a. Ọ bụrụ n’ịzighi ahụmawanye ngwa ngwa na ọrụ afọ ọfụma, nwekwuo oke nnu ị na - a forụ maka ụbọchị ole na ole ruo mgbe ị na - eme ya.
Mara: Ọtụtụ mmadụ na-ebu oke mmiri n'ihi ya, ahụ ha na-ejide mmiri. Mgbe ịmalite itinye nnu n'ime ụdị a, ụfọdụ mmadụ ga-ete mmiri mmiri asọ ya mere ya mere ha ga-ewere naanị 1 / 4 tsp. ma ọ bụ na-erughị ụbọchị na mbido ruo mgbe ahụ ha malitere imeghari ka ịnwe nnu na mgbakwunye na nri ha.
MmiriFreeFreeMart Ekwesịrị ka a rie ya maka nzube nke ikuku. Ọ ga-akụ mmiri nke mmadụ ngwa ngwa karịa ihe ọ bụla ọzọ achọtara m ma ọ bụ ejiri ya mee. Mgbe oge ụfọdụ gasịrị, bowel kwesịrị ịdịkwu mmiri, na-eme ka ijegharị dị mfe na ị na-emechi ọ bụla.
2. ANYA MARA
Ọla edo dị mkpa maka ịgbanye ọrụ nke akụkụ nke iwepụ ahụ. Mgbe ị na-ewere ShopFreeMart Ọcha edo edo n'ụzọ akwadoro maka nhicha ụbọchị iri, mkpụrụ ndụ ahụ ga-enwe ike dị elu imeghe na ịhapụ nsị ahụ niile.
Cheta na ikpochapụ toxins bụ ebumnuche bụ isi mgbe ị na-ekwu okwu ọ bụla banyere ọrịa ọ bụla. Ihe niile yiri ka ọ na-arụ ọrụ nke ọma ma na-adịte aka mgbe ọ dị ọcha. Chọpụtala na ụgbọ ala gị na-arụkarị ọrụ nke ọma mgbe mmanụ gbanwere?
Ana m akwado ịgbakwunye otu ọkara karama nke ShopFreeMart Ọla edo na nnukwu iko galọn, yana 6 tụda nke ShopFreeMart Hydration Drops Consintrate wee mechaa jupụta mmiri galọn na mmiri ọilledụ .ụ. (Mgbe ị na - eji ọla edo n'ụzọ a, a ga - agwakọta ya na mmiri ajị ajị na ọ dịghị ihe ọ bụla.)
Ihe mbu n’ututu, Xua 8 - 12 oz nke agwusa mmiri nke edo edo n’elu afo efu. Ọ bụrụ n ’ị ga-ebu ụzọ ghachaa ezé gị, ejila akwa eze. Jiri ma shopFreeMart shave na shawer gel ma ọ bụ jiri mmiri saa.
Chere ruo ọkara otu awa tupu ị rie ma ọ bụ anythingụọ ihe ọ bụla.
Mgbe imechara nhicha ụbọchị iri ahụ, laghachi na-etinye ihe ntanetị jupụtara na Pure Gold n'okpuru gị oge 3-7 kwa izu ka Gold na-erikwa ụbụrụ ma kwenyere na ọ na-edozi klọọkụ dị na DNA gị nke Rad Rades na-awakpo ya mgbe niile. ahụ gị.
Fọrọ nke nta ọrịa niile ga - esonyere ọnọdụ ebe enwere ọrịa na - akpata micro-nzukọ ma ọ bụ nje ndị ọzọ na - egbu egbu na-egbu ahụ gị. Ọ dị ka igurube nke gbara gburugburu anụmanụ nwụrụ anwụ na-anwụ anwụ.
Achọpụtala ugbu a na ndị mmadụ na-arịa Alzheimers nwere ọnụnọ nke ụbụrụ ha. A na-ahụkwa Nematodes na ndị ọrịa Lyme na ikekwe na ndị ọrịa MS.
Candida bụkwa nsogbu dị na ọtụtụ ndị mmadụ, nke ahụ bụkwa n'ihi akụkụ dị ukwuu n'ihi eziokwu ahụ na ị consumptionụ shuga nke ụdị ihe niile agafewo n'elu ụlọ. Candida na-amị mkpụrụ n'ebe ọ bụla enwere shuga ma anyị maara ugbu a na ọrịa cancer abụghị ihe karịrị ọchịchị candida tojuru.
ShopFreeMart PureSilver ewere na usoro ọgwụgwọ nwere ike ịbụ azịza igbu ụfọdụ ndị nkatọ a na-akpatara ndị mmadụ oke nsogbu taa.
E nwere otu nwa agbọghọ dịka ọmụmaatụ nke nwere nnukwu nsogbu n'ahụ ya niile. Dọkịta ya ga-agba ndị nọ ya n'ọnụ mmiri ka o rie. Ọ malitere ị aụ ọgwụ ọgwụgwọ nke ShopFreeMart Silver na oge izu 6, Wart ọ bụla adapụwo n'isi ya ruo na mkpịsị ụkwụ ya.
Silver n'onwe ya ga - emeri ọtụtụ nsogbu, ọkachasị ebe enwere ụdị mbufụt ọ bụla metụtara, n'ihi na ebe enwere mbufụt, enwere bakteria nke nje, nje ma ọ bụ yist.
Ahụla m ọtụtụ ọnọdụ na-erite uru na iwere Silver nke m na-akwado ịnye ya. Ọ nwere ike ịbụ akụkụ dị mkpa nke usoro ahụike gị.
Lemon ma ọ bụ ihe ọ lụ lụ gbara agba ọhụrụ na-egbu ọrịa cancer ngwa ngwa karịa kemoterapi na-enweghị mmetụta ọ bụla na ebe ọ bụ na ọrịa niile nwere otu mgbọrọgwụ, ịgbakwunye lemon ma ọ bụ lime n'ihe oriri nwere ike inye aka. Nke a bụ ụzọ dị mma ma doo anya nke ịdị ọcha nke nwere ike ikwado ọgwụgwọ na ahụ ya niile.
Ọtụtụ oge na ụbọchị m na-a Xụ ihe ọNUMụ Xụ 20. nke mmiri site na ihe ọ juiceụ ofụ nke 2 eterechi obere limes ma ọ bụ 1 / 2 gaa na 1 lemon na 1 / 4 tsp. nke ezigbo nnu. M na-eme nke a oge ọ bụla agụụ agụụ na-agụ m ma ọ bụ chọọ ume ọzọ.
Mara: Ejikwala nnu nnu oge niile ma ọ bụrụ na akpịrị riri gị mmiri (nke ọtụtụ ndị bụ) ị nwere ike iji obere nnu nnu na mbido ka ahụ gị dị na njigide mmiri ma ọ ga-ewe oge ịhazi onwe ya. ka ị nweta ụdị nnu dị mma na nnukwu mmiri.
Ọtụtụ puku mmadụ na-ejikarị mmiri lemon dị ka ụzọ isi mee ka ahụ dị ọcha ma ọ nwere ike ịme ya n'enweghị nsogbu ọ bụla maka ụbọchị 7 n'erighị nri ọ bụla.
Enwekwara ike ime nke a maka mkpirisi mkpirisi iji dabara na atụmatụ onwe gị.
Ikwesiri inwe izu ike ọzọ mgbe ọ bụla ị na -eme nhicha.
Ọ bụrụ na enwere m ike ịhọrọ otu ngwaahịa ShopFreeMart maka iwusi sistemụ mgbochi na ikpuchi ọrịa, ọ ga - abụrịrị Siaga. Ana m enye ngwaahịa a ihe ngosi 5-star n'ihi ọnụọgụ na nri dị iche iche ọ na-enye, ọtụtụ n'ime ha edepụtara nke ọma na saịtị pub-med ka ọ na-ewusi ahụ ike na ọgụ ọ na-alụ ọgụ na-egbochi enweghị nsogbu, mgbaàmà iku ume, ọbara dị elu. ọbara mgbali elu na ọbara kansa.
Mara: N'ọnọdụ ndị a na-adịghị ahụkebe, ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike ịnwe mgbaàmà detox (afọ ọsịsa, ike ọgwụgwụ ma ọ bụ ihe mgbu). Ọ bụrụ n’ịhụ mgbaàmà ndị a, ị nwere ike belata ego ị na-ewere maka ụbọchị ole na ole. Ndinya mmiri bụ ezigbo ihe ma ọ bụrụ na ị ga-ebi na mgbaàmà ya, ọ kachasị mma iwepụ nsị ndị a n'ahụ gị.
Extraụ mmiri dị ukwuu ga-enyere Siaga aka ịrụ ọrụ ya nke ọma ma wepụ nsensi mmiri ọ bụla enwere ike ịhapụ ma kpochapụ ya n’arụ gị nke ọma. Site na ahụmịhe nke m, WaterFreeMart Hydration Water na-enyere hydrate ahụ aka ma kpopụ nsị dị mma na ngwa ngwa karịa mmiri ọ bụla ọzọ achọtara m na mgbe agwakọta ya na mmiri mmiri ọ gbanwere karịa na-ewepụ nsí karịa mgbe ejiri mmiri mmiri ma ọ bụ mmiri a gwakọtara agwakọta.
*** Mmiri zuru oke dị mkpa iji nwetachaa mkpofu na idebe ***
6. NKWUKWU NSỌ - Ọrịa ndị dị ala na - ebute ogo ọgwụ oxygen dị ala.
Kwuru isi okwu banyere mmeghari iku ume: “Lee ụfọdụ akụkọ na-atọ ụtọ gbasara Cancer na ọrịa ndị ọzọ niile. Ihe omuma a gha agwa gi otu esi eme ngwa ngwa 12 ozo Oxygen na aga n’azu obara gi ma rute n’olu obula na aru gi. Edere ihe a na sayensi na Mahadum buru ibu na Utah.
7. MAGNESIUM - Nnyocha na-egosi na ọtụtụ nri taa na-akọ ụkọ na Magnesium, yabụ na ọtụtụ ndị mmadụ ezughi oke na mmanụ a dị mkpa.
MARA: shopFreeMart Magnesium bụ ikekwe Magnesium kachasị mma ị nwere ike ịzụta. Enwere ike iburu ya ọnụ ma ọ bụ tinye ya n'isi.
Enweghị ike nri magnesium nwere ike ịgụnye nkwonkwo akwara, mgbakasị ahụ, mgbatị ihu, ụra na-adịghị mma, na mgbu na-adịghị ala ala. Ule na-egosi enweghị ike nke Calcium nwere ike ịbụ ụkọ Magnesium na otu n'ime ndụmọdụ mbụ mgbe ị nwetara nsonaazụ ule Calcium bụ mgbakwunye magnesium.
Tupu ịchọta ShopFreeMart Magnesium, nyocha m gosipụtara na ụzọ kachasị mma iji weghara Magnesium bụ transdermally nakwa na ọtụtụ mgbaàmà ahụike siri ike na-anabata nke ọma mgbe itinye Magnesium mmiri mmiri. Enwere ike iji ShopFreeMart Peeji Magnesium ma na-eji ya eme ihe site na ịbanye n'ime anụ ahụ yana n'ime.
8. OIL SWAN
Mmanụ Ala bụ otu n'ime ụzọ kachasị dị ọnụ eji esi nsị anụ ahụ n'ahụ gị ọtụtụ mmadụ agwọkwaara onwe ha ọnụọgụ nke nnukwu ajọ ọrịa na naanị ọgwụgwọ ụlọ a.
Simplezọ a dị mfe na-eme ka o kwe omume ịgwọ ọrịa dị iche iche n'ụzọ dị irè, n'ọnọdụ ụfọdụ na-eme ka mmadụ nwee ike izere itinye aka na ịwa ahụ na ị medicationsụ ọgwụ nwere ike inwe mmetụta ọjọọ. Ihe na-enye obi ụtọ nke usoro ọgwụgwọ a bụ ịdị mfe ya.
Ihe mejupụtara ya bụ Sunflower ma ọ bụ mmanụ Sesame na-agba n’ọnụ. A na-emezu usoro ịgwọ ọrịa ahụ site na iwepu nsị na-egbu egbu na-enweghị ịkpaghasị ahịhịa osisi dị mma. N'ụzọ dị otu a, ọ ga - ekwe omume ịgwọ sel, anụ ahụ na akụkụ ahụ niile n’otu oge. Dr. Karach kwuru na ụmụ mmadụ na-ebi naanị ọkara oge ndụ ha. "Ha nwere ike ibi ndụ ahụike ka ọ bụrụ afọ 140 ruo 150."
N’ụtụtụ tupu i rie nri ụtụtụ n’a anụ nzu, ị na-ewere otu tablespoon nke Sunflower ma ọ bụ Sesame nke dị n ’ọnụ mana ilola ya. Bugharịa mmanụ ahụ “nwayọ” n'ọnụ dị ka ọ na-asa ma ọ bụ na-anyụ. Dị ka Dr. Karach si kwuo ya, “zap, kupụ ma kpụpụ ezé” ruo nkeji iri na ise ruo nkeji iri abụọ. Usoro a na --eme mmanu agwakọta na mmiri.
Ejiji na-eme ka enzymes na enzymes na-adọpụta nsị n'ime ọbara. Ighaghi mmanu mmanu o buru na o ghuru ihe ojoo. Ka usoro ahụ na-aga n’ihu, mmanụ ahụ na-acha aja aja ma chawa ọcha. Ọ bụrụ na mmanụ ka edo edo, ọ dọpụtaghị ogologo oge. A na-esikwa ya n'ọnụ. A ga-asacharịrị onu ọnụ ọ ga-asachapụ ọnụ. Ejila nhicha nhicha akwa. Naanị jiri mmiri mgbata mmiri na mkpịsị aka ochie ọ bụla dị ọcha.
Ọ bụrụ na mmadụ ga-ahụ otu mpịakọta nke oge a 'iyi ọkụ' a na-agba 600 dị elu n'okpuru microscope, mmadụ ga-ahụ ụmụ ahụhụ na ọkwa mbụ nke mmepe ha. Ya mere kpochaa nsacha ahụ nke ọma; can nwere ike ịgba ntakịrị nke ShopFreeMart PureSilver iji hichaa ebe a na-edebe nsị n'ihi na mkpo ya nwere nje na-emerụ ahụ na nsị anụ ahụ na-egbu egbu. Ncha na-egbochi nje nwere ụfọdụ mmetụta ọjọọ yana ya mere anaghị m akwado iji ya.
O di nkpa ighota na n’oge mmanu a na –eme ihe ndi mmadu n’etu mmanu. Nke a na - eduga na ahụike ka mma. Otu ihe kacha pụta ìhè n’usoro a bụ ịsọpụ ezé ezighi ezi, mkpochapu ọgbụgba na-agba ọbara na anya nke ezé.
A na-eme mmanụ mmịpụta / ọsụgharị kacha mma tupu nri ụtụtụ. Iji mee ka usoro ọgwụgwọ ahụ dịkwuo ngwa, enwere ike ime ya ugboro atọ n'ụbọchị, mana mgbe ọ bụla tupu nri na afọ efu. Hụ Mkpịsị Mmanụ
Agwara m akụkọ banyere onye nwere ọrịa cancer ara nke 4th. Ọ nọ na nnukwu ihe mgbu, ya mere, dọkịta ya tinyere ya na morphine. Ọ chọpụtara na iwere 1 oz na-asa ahụ nke na-ekpo ọkụ nke ukwuu. Ncha dị na mmiri a gbanyere na mmiri saa ahụ mere ka ahụ nwee ahụ efe dị ukwuu yana maka nke a ọ na-ewere ọtụtụ ịsa ahụ kwa ụbọchị.
Dabere na onye gwara m akụkọ a, mmiri a na-asa ahụ gbara ọchịchịrị gbara ọchịchịrị ma nwee isi na-esi ísì ụtọ, nke pụtara ihe si na anụ ya na-apụta.
Ọ bụrụ na ọrịa kansa lara ya ọnwa ole na ole ma naanị ihe gbanwere na ndụ ya bụ akwa nhicha ahụ ncha na-asa ahụ.
Nke a bụ nnọọ anecdotal, mana ọ bụrụ na ị na-arịa ụdị mgbu ọ bụla, jisie saa ahụ ma ọ bụ abụọ NVIRO ncha na-asa ahụ wee saa ahụ wee hụ ma inwere ahụ iru ala.
NVIRO ka eji eji mmanu ahu mee; Ọ bụ ihe dị mma ma dị ike zuru oke iji hichaa ekwú gị na ihe a na-eghe eghe, ma kpamkpam nchekwa ma dịkwa nwayọ zuru oke iji saa ala nwa gị.
Tupu ịbanye na mmiri ịsa ahụ, ana m akwado ị drinkingụ iko mmiri na-ekpo ọkụ nke ShopFreeMart Hydration Water (KAR NOTR HE ATBARA ỌRAT ỌN IN NA MVROWAVE OVEN).
Gbaa mbọ hụ na mmiri ịsa-ahụ gị dị oke ọkụ dịka ịnwere ike ịkwụsi ike ka ị wee daa nke ukwuu.
Mee nke a oge ọ bụla ọ dị ka ọ dị nfe.
10. Nri - NIILE EGO NA-EGO nri gi!
Ihe ọ bụla dị n’eluigwe na ụwa nwere ịma jijiji pụrụ iche nke ya. Okwu nsi ahụ si n’otu mgbọrọgwụ dị ka nke dị mma ma ọ bụrụ na-emebi ihe elektrọnik na-ebute akwara ndị mejupụtara mkpụrụ ndụ nke na-eme ka mkpụrụ ndụ gị daa ọrịa.
Kwesịrị iwepu nri acid niile na - eme nri gụnyere soda, shuga, ndị na - atọ ụtọ, ọka, ọka, mkpụrụ osisi, ihe ọ fruitụ fruitụ mkpụrụ osisi na ọtụtụ mmiri ara ehi. Kachasị wepụ ihe oriri GMO niile. A na - agbanwe ihe oriri GMO site na mkpụrụ ndụ ihe ọ bụla na ahụ mmadụ enweghị ike iji ụdị nri ndị a. Ọzọkwa, nri GMO niile bu mmiri ọgwụ na-egbu egbu nke ejiri ya na -eme ka ha too.
Achọpụtara m na mgbe ndị mmadụ enweghị ike iwepụ ihe mgbu ma ghara ịnabata enyemaka ndị ọzọ na usoro a, enwere ihe ha na-eri ma ọ bụ na-a drinkingụ ihe ọ bụla ha kwesịrị ịhapụ ya, ọ nwere ike ịdị mfe dị ka iri nri ndị gbanwere mkpụrụ ndụ ihe nketa. ma ọ bụ na-eri anụ sitere na anụmanụ ndị na-eri nri GMO.
Mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri kwesịrị ịdị ọhụrụ mgbe niile. A ga-erikọta mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri dị iche iche, ma eat NA-EGO mkpụrụ osisi na anụ ya, akwụkwọ nri esiri ya ma ọ bụ na ntụ ọka. A haziri mkpụrụ osisi ịhapụ afọ n’ime ọkara otu awa ma ọ bụrụ na e rie ya na nri ndị ọzọ, ha ga-anọ n’afọ ahụ karịa ọkara otu awa, ha ga-ewepụta ọtụtụ acid na gas. Nri oriri adịghị mma maka oriri mmadụ, ọ gaghị enye gị ihe ịchọrọ ịmepụta mkpụrụ ndụ dị mma.
Iwere ntakịrị mmanya cider mmanya ma ọ bụ ụfọdụ enzymes nri na nri dị arọ nwere ike inye aka melite mgbaze ma belata reflux acid site na mgbu.
Ọtụtụ mmiri dị ọcha dị mkpa maka ahụike. Na mgbakwunye na ihe ọ otherụ drinksụ ndị ọzọ ị nwere ike ị consumeụ, ị ga-a halfụ ihe ọ weightụ halfụ ọkara ahụ gị dị ncha mmiri. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị tụọ 100 lbs. ịkwesịrị ị drinkụ mmiri 50 mmiri kwa ụbọchị. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị na-a Shopụ mmiri ShopFreeMart Hydration Water ịgaghị a muchụ mmanya. Ekwenyere m na ị drinkingụ otu iko iko mmanya nke 8 nke ShopFreeMart Hydration Water ga-eme gị nke ọma karịa ị drinkingụ galọn otu mmiri a na-ejighị ya na ShopFreeMart Hydration Drops Concentrate.
11. ANgbanwe Obi site na iche echiche na-eche echiche! “Amaghị ihe bụ ihe na - egbu egbu, na - akpata ọrịa cancer niile bụ adịghị ọcha yana ikekwe ịgbaghara.”
11. Ihe ọzọ m na-eji, nke m chọpụtara ka ọ baa uru bụ ịtụgharị uche ma ọ bụ ịnọdụ nwayọ ma chee na ahụ m nwere nri niile ọ chọrọ maka ịgwọ ọrịa na imegharị ahụ. Mgbe ahụ, m kpuchiri onwe m mmetụta nke inwe ihe oriri na-edozi ahụ site n'ịjụ onwe m, "Kedụ ka enwere mmetụta nri niile achọrọ m iji gwọọ ma mee ka ahụ m dị ọhụrụ?"
Nwere ike mechie ntụgharị uche a site na nkwenye site na ịsị ihe dị ka “yabụ mee ya” ma ọ bụ “Enwere m obi anụrị na ekele ugbu a na enwere m nri niile m kwesịrị ịgwọ ma mekwa ka ahụ m dị ọhụrụ.”
Site na iji Protocol Health - Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na Nsogbu kachasị njọ nwere ike ịme Ọ nweghị ihe?
Christine Waterbury nwere 4th Stage Thyroid na Lymph Node Cancers mgbe ọ malitere na Protocol Health. Mgbe ọ nyochasịrị n'ụlọ ọgwụ, o butere ọrịa nje MRSA, nke naanị ya na-egbu. Site na sistemụ ọrịa na-esighi ike yana n'ihi oge ọrịa kansa ya na eziokwu ahụ bụ na ndị dọkịta enweghị ihe ọ bụla ga-egbu MRSA, ha nyefere ya ịnwụ.
Di ya Richard nụrụ banyere usoro nyocha ahụike m, ọ malitere inye ya Silver, mgbe ọ ka nọ n'ụlọ ọgwụ. Ọ ugboro ugboro mgbe ọ na-ete ọla ọcha na igbe nke ụkwụ ya. Richard kwenyere na Silver etinyewo n'ọbara ya, na-egbu MSRA.
Pịa ebe a gụọ Isi nke Cancer